के माइन्ड मेशिनहरू तपाईंको मानसिक विकारको उत्तर हो? - मन जिउँदो - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
दिमाग वा मस्तिष्क मेसिनहरूले स्पन्दित ध्वनि, फ्ल्याशिंग लाइटहरू, चुम्बकीय वा विद्युतीय क्षेत्रहरू, र कहिलेकाँही यी स्पष्ट विकल्पहरूको संयोजन मानसिक स्पष्टताको लागि मद्दत गर्दछ। तिनीहरू एक आराममा आराम गर्न, मनोरन्जन, र तपाईंको दिमाग सबै एक स्टप मा मद्दतको साथ श्रेय छन्। युवा र वृद्ध सबैले पत्ता लगाए कि मस्तिष्क मेसिनहरूले धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको दिमाग सुधार गर्न मद्दत गर्दछ चिन्ताका विषयहरूलाई व्यवहार गर्ने देखि मेमोरीमा सुधार गर्नका लागि।
दिमाग मेसिनहरूले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछन्, र यहाँ केहि धेरै साधारण तरिकाहरू छन्:
निश्चित मन जिउँदो मेशिनहरूले तपाईंलाई बुढेसकालको लक्षणहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा संज्ञानात्मक प्रकार्यहरू अर्थात मेमोरीको क्षति समावेश हुन सक्छ, तर यसले अधिक सीधा समस्याहरू पनि समावेश गर्न सक्छ जस्तै सन्तुलन वा नियमित रूपमा झर्ने। नियमित आधारमा यी मुद्दाहरू अनुभव गरिरहेका बुढा व्यक्तिहरूका लागि डेभिड प्रसन्न माइंड मेसिनले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ!
अत्यधिक किफायती र तपाइँको छनौटको १० विभिन्न सत्रहरू प्रदान गर्दै, डेभिड डलाइटले तपाइँको थकित बिरामी शरीरमा चमत्कारहरू गर्न सक्छ। यसले तपाईंको दिमागलाई तिखार्ने, निद्रा र मुडलाई बढावा दिन साथै तपाईंको सम्पूर्ण व्यक्तिलाई उर्जा दिन सहयोग पुर्‍याउँछ। थप रूपमा, मेशिनले उत्तम परिणामहरू वितरण गर्न नवीनतम अनुसन्धान खोजहरूको उपयोग गर्दछ।
- ह्यान्डल चिन्ता
यदि तपाईं आफ्नो दैनिक जीवनको कुनै पनि चीजको सम्बन्धमा डर र चिन्ता महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जान्नुहुन्छ कि तपाईंले लिनु भएको हरेक कदम कमजोर बनाउँदैछ। चाहे तपाईं दन्त चिकित्सकको लागी जाँदै हुनुहुन्छ वा चाहानुहुन्छ कि तपाई आफ्नो मालिक, डेभिडबाट लुक्न सक्नुहुनेछ प्रसन्न प्लस राम्रोको लागि तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ।
लाइट थेरापी र २ different फरक सत्र विकल्पहरूको प्रयोग मार्फत, यो मेशिनले चिन्ताको गम्भीर र प्राय: बेवास्ता गर्ने प्रभावहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो मिसिनले तपाइँलाई तपाइँको मुटुको दरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ कि केवल एकाग्रताले मात्र गर्न सक्दैन!
उपचार को दुखाई
हामी मध्ये धेरैले हाम्रो जीवनकालमा केही मात्रामा दुखाइ अनुभव गर्दछौं, तर यदि तपाइँ औषधि बिना नै तपाइँका लक्षणहरू प्रबन्ध गर्ने उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई कठिन समय हुन सक्छ। को मन जिउँदो ओएसिस CES उपकरण हानिकारक ड्रग्सको प्रयोग बिना नै दुखाई व्यवस्थापनको वैज्ञानिक तरीकाले प्रमाणित तरिकाको एक राम्रो उदाहरण हो।
CES धेरै वर्षको परीक्षण र त्रुटिको साथ साथै २०० भन्दा बढी अध्ययनहरूको परिणाम हो जुन यसले सजिलै काम गर्दछ। यसले मस्तिष्कमा फेला परेका न्यूरोट्रान्समिटरहरूको संख्यालाई गुणा गरेर सहयोग पुर्‍याउँछ जसले शान्त भावनालाई मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ। सेरोटोनिन र एन्डोरफिनको एक उच्च स्तरको परिणामस्वरूप बिरामीहरूलाई बढी शान्त महसुस गर्न सकिन्छ, त्यसकारण, कम दुखाइ।
-Increase अकादमिक प्रदर्शन
चाहे तपाइँ फेरि स्कूल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ वा ठूलो परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, DAVID स्मार्ट मेसिनले तपाईंलाई एक भन्दा बढि तरीकाहरूमा मद्दत गर्न सक्दछ। यो मेशिनले ब्रेनवेभ मनोरन्जन प्रदान गर्दछ जसले मुडलाई बढावा दिन, चिन्ता कम गर्न, र समग्र, शैक्षिक प्रदर्शन बढाउन मद्दत गर्दछ।
दिमाग मेसिनहरु तपाईको जीवनमा दैनिक समस्याहरू जस्तै मानसिक विकारहरू, संज्ञानात्मक मुद्दाहरू, र पीडासँग डिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित छन्। मन जिउँदो एक ब्रान्ड हो जुन हजारौंले सस्तो मेशीन र नयाँ टेक्नोलोजीको साथ विश्वास गरे तपाईका लागि योग्य समाधानहरू ल्याउन!